यस कारण शेयर बजार विहीबारको बढ्यो - Dainikee News::
यस कारण शेयर बजार विहीबारको बढ्यो
काठमाडौं, जेठ ३१ । जेठ महिनाको अन्तिम दिन नेप्से बढेर बन्द भएको छ । कारोबार शुरु भएदेखि बढेको बजार अन्त्यसम्म बढेर बन्द भएको छ । विहीबार शेयर बजार ५ दशमलव २३ अङ्क बढेर १ हजार २ सय ४७ दशमलव ३० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने १० कम्पनीमा प्रभु बैङ्कको संंस्थापक तर्फको शेयर प्रतिकित्ता रू. १ सय ६० मा रू. १ करोड ९५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । साथै, राधि विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८५ प्रतिशत र नेपाल हाइड्रो डेभलपरको ९ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी, जेविल्स फाइनान्सको शेयर मूल्य ३ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०७५ /Thursday, June 14th, 2018, 9:42 pm